Apple ga-amalitegharị 'Taa na nnọkọ' Apple 'na US na Europe na Ọgọst 30 | Esi m na mac
Apple ga-amalitegharị 'Taa na Apple' nnọkọ onwe onye na US na Europe na August 30
Manuel Alonso | 18/08/2021 10:00 | ọtụtụ
Otu n'ime ezigbo agwa Apple nwere bụ ịkụziri anyị ka anyị jiri ngwaọrụ na akụrụngwa dị iche iche dị ugbu a site na mkparịta ụka na nkuzi emere n'okpuru usoro taa na Apple. Site na ọrịa na -efe efe, klaasị ndị a na -aga n'ihu mana na usoro ịntanetị na ọtụtụ mmekọrịta adịghịzi. Ozi ọma ahụ bụ na ha si na ya lọta n'onwe gị site na njedebe nke ọnwa.
Ka ọ dị na August 30 N'afọ a, nnọkọ nkuzi ihu na ihu na klaasị nke Apple na-eduzi n'okpuru usoro taa na Apple ga-akụ ụlọ ahịa Apple ruo August 30. Ọ ga -eme ya ọ bụghị naanị na US kamakwa na Europe. N'ihi COVID-19 anyị ga-eburu n'uche na a ga-enwe usoro nchekwa mana a na-agba mbọ ịlaghachi na nkịtị na ihe omume ụlọ ọrụ niile, n'agbanyeghị na ụfọdụ na-efu karịa ndị ọzọ. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala nlọghachi na August 30, mana ewepụghị ya na ọ nwere ike gbuo oge n'ihi ọnọdụ ịdị ọcha nke juru n'oge ahụ.
Ọnọdụ adịla mma ka otu afọ na ọkara gachara, anyị nwere ike bido ime ihe dị ka anyị mere tupu ọrịa ọjọọ a nwere obi ụtọ. Mgbasa ozi dị n'ime ya sochiri ya imepe ndoputa maka Taa na nnọkọ Apple site na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ahịa nwere ike ịdebanye aha ugbu a maka klaasị na mpaghara ha.
Ugbu a ụlọ ahịa Apple niile mepere emepe, n'otu oge, anaghị achọkwa nkpuchi nkpuchi maka ọnụọgụ na ọgwụ mgbochi dị mma. Agbanyeghị, ihe niile gbanwere na ọzọ a na -amụzi ihe ndị ahụ. N'ihi ya anyị enweghị ike ịbụ mmeri mmeri. Ọgọst 30 na-esote anyị ga-ahụ ma emegoro nzukọ ihu na ihu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple ga-amalitegharị 'Taa na Apple' nnọkọ onwe onye na US na Europe na August 30
A na -emelite iCloud maka Windows na ihe ọhụrụ maka nchekwa gị
WatchOS 6 Beta 8 dị ugbu a maka ndị nrụpụta